Umsebenzi unikezela ngearhente yokubhala ghost Papernerds Papernerds
Umbhali wesiporho uZurich
Sinethamsanqa lokuba nababhali baseJamani kunye nababhali besiporho abenza umsebenzi wabo ngesiJamani saseJamani
Ndisebenza njani kuwe? Unokusithumela ngokulula amaxwebhu akho esicelo kunye neleta yokugubungela, i-vita vita kunye nezatifikethi. Sebenzisa
Inkokeli yeqela lokuthengisa
Sijonge inkokeli yeqela ekuthengeni ngokukhawuleza. Nceda ufake isicelo usebenzisa i-portal ye-intanethi ngokugqibeleleyo
Intloko yokuthenga eJamani
Sijonge iNtloko yeNtengo yokuthenga eJamani kwindawo yaseStuttgart ngokukhawuleza. Nceda uthumele amaxwebhu akho esicelo ngokusebenzisa i-portal yethu yomenzi we-intanethi
«Buyela umva Seita1 Seita2 Seita3 Seita4 Seita5 Ngaphambili "